War Degdega:-Magacyada 5 Website Oo Xukuumada Somaliland Hawda Ka Saartey Iyo Danbiga Lagu Eedeeyey |
War Degdega:-Magacyada 5 Website Oo Xukuumada Somaliland Hawda Ka Saartey Iyo Danbiga Lagu Eedeeyey
xukuumadda Somaliland ayaa Hawadaka saartay shan Website, oo uu xafiiska
Baadhista Danbiyadda Somaliland ku soo Eedeeyey inay faafiyeen warar been abuur ah, Dacaayad, kuwaas oo uu sheegay inay saamayn ku yeesheen Amniga Dalka isla markaana ay abuurayaan isku Dhac beeleed.
Amarkan oo ay Maxakamadda Gobolka Hargeysi soo saartay ayey ku tilmaantay inay ku ogolaatay codsiga uga yimi xafiiska baadhista Danbiyada iyo Xeer ilaalinta, waxaanay amartay dhamaan shirkadduhu inay fuliyaan amarkaasi.
Mareegaha go’aanka laga soo saaray ayaa kala ah
1 : www.Karrinnews.com
Waxaanay maxkamaddu go’aankeeda ku sheegtay inay u yaalaan Dacwado ka dhan ah.
Talaabadan ayaa ah tii ugu horaysay ee nooceeda ah ee ay Xukuumadda Somaliland ku fuliso Mareegaha Somaliland, isla markaana ay suurtogaliso in mar kaliya hawada laga wada saaro.
Amarka Maxkamaddaayaa u qornaa sidan:-
Amar Xayiraad Mareego Internet (Website)
Mudanayaal anagoo ka duulayna codsiga xayiraada sumaddiisu tahay qbd/423/017 ee ku Taariikhaysan 02/07/2017 ujeeddadiisuna tahay xayiraada website-yada dalka ku baahiya warar khaldan oo ka soo baxay Xafiiska Taliyaha qaybta baadhista danbiyada C.I.D, kuna codsaday in la xayiro shan mareegood oo ah website-yo ay ku sheegeen inay dalka ka baahiyaan warar been abuur ah oo ku lid ah beelaha wadanka JSL wada dega, faafiyeena dacaayado ka dhan ah madaxda Qaranka JSL, isla maraana taliyuhu qoraalkiisa ku xusay inay taasi sababayso amni daro iyo isku dhac ka iman kara beelaha wada dega dalkan JSL.
Sidoo kale anigoo ka duulaya dalabka ka yimid madaxda Xeer ilaalinta Gobolka Maroodi-jeex ee ku Taariikhaysan 03/07/2017 kuna codsaday in loo tixgaiyo qaybta baadhista danbiyada codsigooda isla markaana xayiraad la saaro website-yada dalka ku baahinaya wararka iyo dacaayadaha been abuurka ah si nabadgelyada guud ee qaranku u ahaato mid xoogan.
Asbaabahaas sare ku xusan dartood waxaan soo saarnay Xayiraadan.
Waxaan ogolaanay codsiga ka yimi madaxda xeer ilaalinta gobolka Maroodi-jeex ee ku taariikhaysan 03/07/2017 ee uu ku codsaday in la tixgaliyo codsiga qaybta aadhista danbiyada C.I.D ee sumadiisu ahaa QBD/BD/423/017, kuna taariikhaysnaa 02/07/2017 ee nuxurkuu xambaarsanaa sare ku xusan yahay.
Waxay maxkamaddu xayirtay dhamaan shanta Website ee lagu so Eedeeyey inay faafiyaan wararka iyo dacaayadaha been abuurka ah ee ka dhanka ah Qaranka JSL oo kala ah:-
Karinnews.com, Baraarugnews.com, Saylactoday.com, Haleelews.com, Suradnews.com
Dhamaan shirkaddaha adeegyada Internet-ka bixiya ee qoraalkani ku socdo waxaan ku amraynaa inay fuliyaan amarkan maxkamaddu ku xayirtay oo Eedo ku taagani maxkamadda yaalaan.
Amarkan xayiraada ah waxa uu soo baxay 12/07/2017.
Xigasho Wargeyska Waaheen.